सीता दाहाललाई लागेको ‘निको नहुने रोग’
काठमाडौं, ३ चैत्र । सीता दाहाल लगभग ठिकठाक हुनुहुन्थ्यो । जब, एक्कासी आफ्ना एक मात्र छोरो प्रकाशको मृत्यु भयो तत्पश्चात सीता दाहालमा समस्या देखिन थाल्यो । उहाँ बिरामी पर्नुभयो । उहाँको उपचारमा श्रीमान् पुष्पकमल दाहाल अहोरात्र खटिइरहेका छन् । देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत उनको उपचारका लागि अनेकौं पहल भएका छन् ।
सीता दाहाललाई भएको चाहीँ के हो ?
सीता दाहाल पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोगले पीडित हुनुहुन्छ । त्यसलाई प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पीएसपी) भनिन्छ । नेशनल हेल्थ सर्भिस ब्रिटेनका अनुसार पीएसपी एक दुर्लभ स्थिति हो, जसका कारण मानिसको मानसिक असन्तुलनका साथै हिँड्न, बोल्न र निल्नसमेत कठिन हुनेगर्छ ।
मस्तिष्कको कोशिकामा क्षति हुँदा यस्तो समस्या देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि सीतालाई रोगले च्यापेको छ । त्यसैले सीताको मन बहलाउन पुष्पकमलले बेलाबेला विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लैजाने गरेको उनको पारिवारिक श्रोतको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पुष्पकमल र सीता म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा पुगेर स्नान गरेको तस्वीर निक्कै चर्चामा आयो । तर, त्यो कुनै मनोरञ्जन थिएन । उहाँ सीताको उपचारकै सिलसिलामा तातोपानी कुण्डमा पुग्नुभएको थियो ।
उहाँको उपचार भारत र सिंगापुरमा पनि गरिएको थियो । तर, पनि सीताको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन ।
निको नहुने रोगः
काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालका डा. प्रत्युष श्रेष्ठका अनुसार पीएसपी पार्किन्सनको सबैभन्दा नराम्रो अवस्था हो । यो रोग पूर्णरुपमा निको हुँदैन, रोकथाम मात्र गर्न सकिन्छ । यसको उपचारविधि भनेको औषधि र अपरेसन हो । औषधिले ठीक नभएमा अपरेसन गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा बिग्रिएर यो समस्या आउँछ त्यो ठाउँमा मुटुमा पेशमेकर राखेजस्तै दिमागमा पनि राखेर उपचार गर्न सकिन्छ ।’
यो रोगको सामान्य उपचार बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा हुँदै आएको छ । तर, सीताको समस्या कुन स्तरको हो भन्ने कुरा रिपोर्ट नहेरी भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । डा. श्रेष्ठले भने, ‘पीएसपीको उपचार हामीले गर्दै आएका छौं । तर, सीता दाहालजीको समस्या कस्तोखालको हो, कुन स्टेजको हो, त्यो नहेरी यहाँ उपचार सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’
डाक्टरका अनुसार पीएसपीको समस्या ६० वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिहरुलाई बढी हुन्छ । बलिउडका चर्चित हास्य अभिनेता कादर खान पनि पीएसपी समस्याबाट पीडित थिए । क्यानडाको एक अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै गत ३१ डिसेम्बरमा ८१ वर्षको उमेरमा खानको निधन भएको थियो ।
यसको लक्षण समयअनुसार गम्भीर हुनेगर्छ । सुरुवाती चरणमा यसको लक्षण अन्य रोगजस्तै हुने भएकाले यो रोग पत्ता लगाउन मुश्किल हुन्छ । यद्यपि हिँड्न, डुल्न, बोल्न र निल्न कठिन भएमा, लड्छु कि भन्ने डर लागिरहेमा, व्यवहारमा परिवर्तन आएमा, मांसपेशी कस्सिएमा, आँखाको चाल नियन्त्रणमा नरहेमा र स्मरणशक्ति हराउँदै गएमा पीएसपीको शंका गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यसको लक्षण पार्किन्सनसित मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले चिकित्सकहरुलाई यो रोग पत्ता लगाउन समय लाग्नेगर्छ । कतिपय अवस्थामा मस्तिष्कको स्क्यान गरेर मात्रै रोग पत्ता लगाउन सकिने डाक्टरहरू बताउँछन् । त्यसैले, यो रोग लागेको शंका लागेमा न्युरोलोजिस्टको सहायता लिन सकिन्छ । पीएसपीको प्रभावकारी उपचारबारे विभिन्न अनुसन्धान भने भइरहेको छ । यद्यपि न्यूरो सर्जन र न्यूरोलोजिस्ट मिलेर यसको उपचार गर्दै आएका छन् । सुरुमा औषधि सेवन गर्ने र औषधिले काम नगरे मस्तिष्कको अपरेशन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
उपचारका लागि अमेरिका प्रस्थानः
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल पत्नी सीताको स्वास्थ्य उपचारका लागि आइतबार अमेरिका गएकाछन् । छोरी गंगा र ज्वाइँ जीवन आचार्यसहित उनीहरु साँझ ५ बजे इत्तेहाद एयरबाट अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । सीताको उपचार अमेरिकाको प्रसिद्ध अस्पताल जोन हकिङ्स् अस्पतालमा हुने बताइएको छ ।